Iipisces njengoMhlobo: Kutheni ufuna enye - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Iipisces njengoMhlobo: Kutheni ufuna enye
Iipisces njengoMhlobo: Kutheni ufuna enye
Iipisceans zithe cwaka, zihlala zihlala zodwa, kwaye azizithandi iindawo ezixineneyo. Ngaphandle koko, zihamba ngokulula kakhulu, zendalo, kwaye zinomdla. Awusoze ufumane abantu abonwabileyo nabonwabileyo kwenye indawo. Bathatha uvuyo olukhulu emhlabeni, ukomelela kwabo kubonakala kungapheli, kwaye akukho nto ibonakalisa ulonwabo lwabo.
Nantoni na onokucinga okanye uziva ngayo, abantu basePisceans kudala beyilindele, balungiselela icebo, kwaye ngoku bayaliphumeza. Amandla apheleleyo enomdla kunye nethuku abanokuyenza, kukuphazamiseka kwengqondo. Babakhathalele kakhulu abahlobo babo, bafuna ukusindisa abanye, kodwa banetyala lokwenzakala okanye lokuphoxeka.
Izizathu ezi-5 eziphezulu zokuba kutheni wonke umntu efuna umhlobo wePisces:
Banyanisekile, bazinikele, kwaye bathembekile kwimpazamo.
Abalindelanga nantoni na konke kunaniselwano ngobubele babo kunye nenkathalo.
Yazi ukuba soze bakulahlekise okanye baxoke kuwe.
Ungathembela kubo ukuba babekhona xa uyidinga, ukubonelela ngenduduzo ngexesha leemvakalelo.
Akukho nto ibaxakeleyo, nditsho nokuzincama kwabo ukuba ulonwabo lwabahlobo babo lusemngciphekweni.
Nje ukuba ungene kwisangqa sabahlobo abasondeleyo, uya kuba namava eparadesi. Baza kukuthanda kwaye bakukhathalele ngokungathi ubungoyena mntu ubalulekileyo emhlabeni. Banyanisekile, bazinikele, kwaye bathembekile kwimpazamo. Ngokwenyani akukho mntu unemvakalelo kwaye ubuthathaka kuba bantu bomthonyama.
Abalindelanga nantoni na konke kunaniselwano ngobubele babo kunye nenkathalo. Nangona kunjalo, kufuneka bafunde ukuthatha isimo sengqondo xa bejamelene nobunzima, ngakumbi bevela kubantu abangabaziyo abahlekisayo okanye abazisebenzisayo. Bangabahlobo abakhulu kuyo nayiphi na indawo yokujonga.
Kukho izinto ezimbalwa ezitsala abantu kubo njengeenyosi kwientyatyambo ezintle. Banobuntununtunu kwaye banolwazelelelo, abaze benze nantoni na enokonakalisa igama labo okanye ubuntu babo obuhle. Kuya kufuneka bachithe ixesha elininzi nomntu ukuze babazi ngokupheleleyo nangona.
Uphawu lweZodiac ngo-Okthobha 4
Bathanda ukonwaba, ukuzonwabisa, ukuzonwabisa, nangona bekwiqela elincinci labahlobo abasenyongweni. Banokuba kukucamngca, ukuzazisa, kodwa kunye neebhabhathane zentlalontle ezihamba zisuka kuluntu ukuya kumnyhadala wentlalontle.
Ngokufanelekileyo, kufuneka balungelelanise izinto, bazicaphukise kwaye batshintshe phakathi kwala macala mabini.
Ewe kunjalo, kuba sithetha ngabantu basePisces, kufuneka sikhankanye namandla abo amakhulu okucinga kunye nokuyila. Bayayisebenzisa xa besebenzisana nabantu, besenza imithambo yengqondo enomdla kunye nokuzonwabisa, imisebenzi eyonwabisayo etsala wonke umntu ngeenxa zonke.
Ukuba nomnye wabo njengomhlobo, masithi ayisiyonto yaphela amandla okanye yeengcinga ezincinci.
Ngaphezu koko, yazi ukuba abayi kuze bakukhohlise okanye baxokise. Ayisiyongxaki yomgaqo, kodwa yenye yobuntu. Abakwazi ukuzizisela ubuxoki. Bangabamsulwa nabaneempawu ezintle.
Inyanga ikwi-aries yindoda ngothando
Nangona kunjalo, xa ujonga indlela abalunge ngayo nabanobubele ngayo abantu basePisces kuwe, bakwalindele into ngembuyekezo. Inani elifanayo leemvakalelo, ukunceda ngexesha lamaxhala, ezinye iingcebiso xa izinto ziba yingxaki, kuya kufuneka unikezele ngento ukubuya nayo.
Bayakukhumbula yonke into oyithethileyo, ke musa ukucinga ngokubuyela kwilizwi lakho.
Ngaphezulu, abasoze balibale ngento oyenzileyo kubo ukuba kuye kwakho into embi. Kungcono ulindele ukuba babe yingqele kwaye babe kude ukuba awukhange uxolise ngenxa yezikreqo ozenzileyo.
Aba bantu babuthathaka kakhulu. Babeka ugxininiso olukhulu kwiimvakalelo, kwindlela oziva ngayo kunye nokwenza ngokusekwe kwiimvakalelo zakho zesisu. Bathatha kubo ukuphilisa kunye nokunceda abanye ukuba baphumelele ekudaneni, ukuziphakamisa emhlabeni kwaye baqhube.
Banokuba nolindelo oluphezulu kubahlobo babo, kodwa ucinga ukuba babandakanyeka kangakanani, awucingi ukuba yinto eqhelekileyo? Emva kwayo yonke loo nto, babeka umzamo omkhulu, ixesha, kunye nokuzibandakanya ngokweemvakalelo kwiibhondi zabo.
Kunzima ukulandela abantu abanjalo kwaye kunzima nokuba iimvakalelo zabo ziphinde zenziwe ngendlela efanayo. Nangona kunjalo, ziyonwabisa kwaye ziyonwabisa, ngaphandle kokungathí sina.
10/24 uphawu lweenkwenkwezi
Uzinikele kakhulu kwaye uthembekile
Ungathembela kubo ukuba babekhona xa uyifuna, ukunikezela induduzo ngamaxesha oxinzelelo lweemvakalelo, emva kokuqhekeka okanye ukuba usilele ukufezekisa injongo ethile. Basoloko bekho, belindele ukukuthuthuzela.
Ngokufanelekileyo, baya kukukhuthaza ukuba ulibale malunga nezinto ezimbi, ukuze uzibambe, unyathele iziqhoboshi kwaye ume okomzuzwana, uthathe konke ube nembono, kwaye ufunde ukukhululeka, ulibale ngayo yonke into okwexeshana. Ngamanye amagama, baya kuzinikela kakhulu kwaye bathembeke, babambelele kubahlobo babo ukuba kunokwenzeka kwaye xa kunokwenzeka.
Baza kunika iingcebiso ezifihlakeleyo zokuba kufuneka wenze into notshintsho, ukukhuthaza obu buhlobo, ukubonisa uxabiso lwakho. Benze yonke into ukuza kuthi ga kulo mzuzu. Basabeka imizamo emininzi. Kuya kufuneka uyibuyekeze le nto. Abenzi ngenxa yesi sizathu sodwa, kodwa kuya kuba bubuxoki ukuthi abalindelanga ukuba nawe ube nomdla.
Okubangela umdla ngokwaneleyo, bayakwazi ukudibanisa abantu phantsi kwesibhengezo esinye, nokuba kungenxa yamandla okuvuma, uhlobo oluthile lovelwano olungena entliziyweni nasemphefumlweni, okanye nge-charisma elula. Bacwangcisiwe, bacwangcisiwe kwindlela yabo yokucinga, kwaye oku kuyenzeka kakuhle kwiiprojekthi zeqela.
Nangona isenokungabi ngabo beza nezimvo zenguqu, banako, nangona kunjalo, banakho ukuzisebenzisa. Benza indawo efanelekileyo yokukhuthaza ezi zimvo, ukulungiselela uphuhliso olusebenzayo lweendlela kunye nemigaqo.
Abangabo egazethi okanye iingqondo ezimxinwa. Ezinye izimvo kunye nezimvo zamkelwe ngaphezulu kuba zinokuvelisa umbono omtsha, kunye neendawo ezininzi zokujonga eziguqula ngokupheleleyo imeko yonke. Bakhetha kwaye bayanyamezela.
Into enabemi basePisces kukuba banovelwano ngendlela emangalisayo, ngengqondo yokuba bazenzakalisa ngokwabo xa abahlobo babo bebotshiwe.
Abakwazi kulinda kodwa bancede kuba ichaphazela ezona ndawo zingaphakathi zobukho babo. Uthando olukhulu kunye nobudlelane bokomoya buqhekeza nayiphi na imiqobo kwaye boyise nawuphi na umgama wabo.
Ngaphandle kwenkxaso yeemvakalelo kunye nexabiso lemvakalelo elidluliswayo, bafuna ukunceda abahlobo babo ngokusebenzayo, ngezisombululo okanye ngemali, ngayo nantoni na eyinyani.
Bangamaqabane afanelekileyo, amayeza, umphilisi, umntu onomdla wokunceda ofuna ukusindisa wonke umntu. Akukho nto ibaxakeleyo, nditsho nokuzincama kwabo ukuba ulonwabo lwabahlobo babo lusemngciphekweni.
Ubuhlobo bePisces: Ukusuka ku-A kuye ku-Z
Uphawu lwePisces Zodiac: Yonke into ekufuneka uyazi
Nge-2 kaJulayi iZodiac yiCancer-Ubuntu obupheleleyo beHososcope
I-Sagittarius Indoda kunye noMhlaza womfazi ukuhambelana kwexesha elide
Umfazi we-aquarius kunye nokuhambelana kwendoda ne-scorpio
kutheni indoda yoonomadudwane ikopela
Iimpawu zeZodiac zika-Agasti 27
Indoda ye-gemini kunye nomfazi we-capricorn ebhedini